Miriwo yakakanyiwa (Mushowa, Miriwo, Bhinzi) Fekitori - China Midziyo yakakanyiwa (Howa, Miriwo, Bhinzi) Vagadziri uye Vatengesi
Miriwo yakakanyiwa (Mushroom, Miriwo, Bhinzi)
Pisa uye utonhorere neanopisa kupisa, saka iyo hwemvura uye inotonhorera mvura haingasvibise chigadzirwa, uye hapana mishonga yekurapa mvura inodiwa. Iyo nzira mvura inosaswa pamusoro pechigadzirwa kuburikidza nepombi yemvura uye mhezi dzinogoverwa mukudzosera kuzadzisa chinangwa chekuvharisa. Yakarurama tembiricha uye kumanikidza kudzora zvinogona kukodzera dzakasiyana siyana zvakapakurwa zvigadzirwa.
Pisa uye utonhorere neanopisa kupisa, saka iyo hwemvura uye inotonhorera mvura haingasvibise chigadzirwa, uye hapana mishonga yekurapa mvura inodiwa. Maitiro emvura akaenzana zvakaenzana kubva kumusoro kusvika pasi kuburikidza nepombi huru-inoyerera yemvura uye ndiro yekuparadzanisa mvura pamusoro pekudzora kuzadzisa chinangwa chekuita mbichana. Iyo chaiyo tembiricha uye yekumanikidza kudzora inogona kuve yakakodzera kune akasiyana akasiyana mumapakeji zvigadzirwa. Izvo zvakapusa uye zvakavimbika hunhu zvinoita kuti DTS sterilization retort ishandiswe zvakanyanya muChina chinwiwa indasitiri.
Pisa uye utonhorere neanopisa kupisa, saka iyo hwemvura uye inotonhorera mvura haingasvibise chigadzirwa, uye hapana mishonga yekurapa mvura inodiwa. Maitiro emvura anosaswa pamusoro pechigadzirwa kuburikidza nepombi yemvura uye mhezi dzakagoverwa pamakona mana etereyi yega yega yekuzadzisa chinangwa chekuvharisa. Iyo inovimbisa fananei tembiricha panguva yekudziya uye yekutonhora matanho, uye inonyanya kukodzera zvigadzirwa zvakarongedzwa mumasofa akapfava, kunyanya akakodzera kune anopisa-anonzwisisa zvigadzirwa.
Kunyudza kwemvura kunodzosera inoshandisa yakasarudzika yemvura kuyerera inochinja tekinoroji kuvandudza kufanana kwetembiricha mukati memutya wekudzosera. Mvura inopisa yakafanogadzirirwa mutangi yemvura inopisa kutanga iyo sterilization maitiro pane yakanyanya tembiricha uye kuzadzisa iyo yekukurumidza tembiricha ichikwira, mushure mekudzivirira, mvura inopisa inodzokorodzwa uye ndokupomberwa kudzoserwa kune inopisa mvura tangi kuzadzisa chinangwa chekuchengetedza simba.
Kuenderera mberi kusinga tsanangurwe kwekudzora mbereko mutsetse kwakunda akasiyana matekinoroji zvipingaidzo muindasitiri yekuchenesa, uye kusimudzira maitiro aya pamusika. Iyo sisitimu ine yakakwirira yehunyanzvi pokutangira, tekinoroji yepamberi, yakanaka sterilization maitiro, uye yakapusa chimiro cheinogona kutungamira sisitimu mushure mekubvisa Inogona kusangana nezvinodiwa zvekuenderera nekugadziriswa uye kugadzirwa kwemazhinji.
Nekuwedzera fan pane hwaro hwekuvharisa hwemhepo, iyo yekudziya svikiro uye chikafu chakapakirwa chakanangana chaicho uye chakamanikidzwa convection, uye kuvepo kwemweya mune sterilizer kunotenderwa. Iko kumanikidza kunogona kudzorwa zvakazvimiririra netembiricha. Iyo sterilizer inogona kumisikidza akawanda matanho zvinoenderana nezvakasiyana zvigadzirwa zvepakasiyana mapakeji.
Iyo Yakazadza Steam Retort ndiyo yakare nzira yekuisa-mumudziyo mbichana inoshandiswa nevanhu. Nezve tini inogona kubereka, ndiyo yakapusa uye yakavimbika mhando yekudzosa. Izvo zviripo mukuita kuti mweya wese ubviswe kubva mukudzoka nekuzadza ngarava nemhepo uye uchibvumira mweya kuti ubude kuburikidza nemavharuvhu emhepo.Hapana kunyanyisa kudzvinyirira panguva yezvikamu zvekubvisa zveichi chiitiko, sezvo mweya usingatenderwe kupinda mukati ngarava chero nguva panguva ipi neipi yekudzvinyirira nhanho. Nekudaro, panogona kuve nemhepo-kudzvinyirira kunoiswa panguva yekutonhora matanho ekudzivirira mudziyo deformation.
Maitiro mukugadzirisa chikafu ndeyekubva kure nemidziyo midiki yekudzosera kumahombekombe mahombe kuvandudza kushanda pamwe nekuchengetedzeka kwechigadzirwa. Midziyo mikuru inoreva mabhasikiti mahombe asingakwanise kubatwa nemaoko. Mabhasikiti mahombe angori akakurisa uye anorema zvekuti munhu mumwe chete afambe.